ကချင်ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ
ကချင်ပြည်နယ်၊ Yingjiang County
ca. ၉၄၀၀၀၀ (၁၉၉၉–၂၀၀၁)
ကချင်ဘာသာစကား (ဂျိမ်းဖော ဟုလည်းသိကြသည်) သည် တိဗက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများထဲက စာ (sal) ဘာသာစကားခွဲဖြစ်ပြီး ကချင်လူမျိုး၏ ရိုးရာဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ကချင်ဘာသာစကားကို မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကချင်ပြည်နယ် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်အဝှမ်းတွင် အများဆုံးနှင့်အဓိကပြောဆိုကြသည်။ ဂျိမ်းဖောစာပေကို ရောမအက္ခရာဖြင့် ရေးသားသည်။
ကချင်ဘာသာစကား ဟုပြောရာတွင် အခြား လူနည်းစု ဘာသာစကားများလဲ ရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့မှာ ရဝမ်, လီဆူ, ဂေါင်ရီ, လချိတ်, မရူ စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကချင်ဘာသာစကားကဲ့သို့ပင် ထိုဘာသာစကားများကို ကချင် ပြည်နယ် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တို့တွင် အသုံးများကြသည်။​
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Jingpho"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကချင်ဘာသာစကား&oldid=738574" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မတ် ၂၀၂၂၊ ၀၃:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။